Sida loo wadaag Google Music on Circles Google+
> Resource > Android > Sida loo wadaag Google Music Google+
Google Music (oo horay Music Beta by Google) ugu danbeyn inoo yimaadoba. Ma saxiixay for Google Music weli? Sidee baad u malaynaysaa waxa ku saabsan yahay? Haddii aad tahay mid ka mid ah in Cunid music saaxiibbadayda la wadaago, Google Music gelineya inaad si fudud u wadaagaan jacaylka aad music. Haddaba bal fiiriya sida aad karaa qayb iibsaday ama aan iibsaday songs Google Google+ , siyaabo kala duwan yar.
Wadaagista Google Music on Circles Google+
Marka aad login xisaabtaada Google Music, heli song oo ku saabsan in ay la wadaagaan oo riix badhanka xagal, si loo helo 'Share song' wax aad tahay. Waxaa Click to 'muujiyaan ilaa Share Google+ 'daaqadaha sida hoos.
Sii comment qaar ka mid dooro oo ay ku wadaagaan Google ka shidmay leh, iyo ugu dambayntii guji Share si ay u tagaan. Ogsoonow in la wadaago habkaani waa kaliya diyaar u iibsaday songs Google, iyo saaxiibadaa ku raaxaysan karaan song oo dhamaystiran hal mar oo keliya intaadan gadan music ah. Waxaa intaa dheer, in aadan heeso aad uploaded saaxiibada ee wareegyada Google+ wadaagi karo.
Sharing Non-iibsaday Google Music
On Google ee Android Market, halkaas oo aad ka iibsan songs Google, waad kala qaybsan kartaan midkood songs iibsaday ama aan iibsaday sida aad jeceshahay.
1. Mouse sarreeyey gabaygii Google aad rabto inaad la wadaagto.
2. 'Share' button ka muuqan doontaa.
3. Guji inay soo qaadaan ay 'Share Google+' window.
4. Ku dar comments aad iyo wareegyada Google+.
5. Riix 'Share'.
6. Hadda qof kasta oo aad la wadaagto this music aan ku iibsaday (oo ay ku jiraan dadweynaha) ayaa awoodi doona inuu ka ciyaaro muunad gabaygan, ka bilowda 30 ilbiriqsi ka ilaa 90 ilbiriqsi. Haddii aad iibsato heesta, waxaad la wadaagi kartaa mid ka mid play full free leh qof walba ee wareegyada Google+. Tani waa isku mid waxa aad sameyn on Google Music.
Farqiga u wadaagga iibsaday Google music iyo wadaaga aan iibsaday Google Music waa in "DHAGEYSO mar FREE" iyo "Dhageyso FALANQEYNTA". Hore waa play onetime buuxa, halka ay kala duwan tahay 30 ilaa 1:30 ee jeer aan xad lahayn. Haddii aad u jecel heesaha ay wadaagaan saaxiibkaa, sababta aan u Qoraynaa in computer si xor ah u ciyaaro aan xadka kasta?
Talooyin: maxkamad ka dib, waxay u arkaan in Google Music ma aha koob oo shaah ah, laakiin waxa ay doonayaan gabayadii free on Google Music? Waxa ay si fudud u qaado, ka eeg sida ay u soo bixi Google Music inay Lugood .